Olee otú Embed sere iTunes Music na ogbe
> Resource> iTunes> Olee otú iji Embed osise Gị iTunes Library na ogbe
Ọ bụrụ na ị na-na-gị iTunes music iji, ọ na-enyere aka nwere niile nke gị music egosipụta na artwork. Otú ọ dị, ọ bụrụ na gị music collection ekpuchi dị iche iche na isi mmalite nke downloads, Rips, na-azọpụta mbipụta, ọ pụrụ ịbụ ihe siri ike nwere artwork nke ọ bụla song. iTunes onwe ya nwere ike mgbe ụfọdụ chọta artwork n'ihi na gị songs ma unu apụghị embed artwork ka songs. Ke ibuotikọ emi, anyị na-aga ele anya na otu nke kasị mma artwork achọta ngwaọrụ nke nwere ike ikwesị ntụkwasị obi na-esi na gị music n'ọbá akwụkwọ haziri na Embed artwork niile gị na iTunes music mere na ị pụrụ na-artwork n'ebe ọ bụla. Wondershare TidyMyMusic maka Mac (Wondershare TidyMyMusic ) bụ ihe anyị nwere ike ikwu. Download na wụnye a usoro na gị Mac-ahụ n'okpuru zuru ezu nkuzi.
Mepee omume na ọ ga-smartly iṅomi gị iTunes n'ọbá akwụkwọ ma tinye niile music na faịlụ tree n'okpuru idozi iTunes. Na ihe ọ bụla oge ị na-emeghe ya, ọ ga-eme scanning ọzọ ka ha wee n'aka mba ọhụrụ songs na-ekpe si.
2 Chọta artwork maka gị niile iTunes music
Gaa nkụnye eji isi mee akụkụ nke window na-ahụ a iṅomi bọtịnụ. Tinye akà rà Chọọ maka unidentified Songs na pịa bọtịnụ. Mgbe ahụ, a omume ga-amalite chọta artwork nakwa ndị ọzọ ozi dị ka track nkọwa, lyrics nile songs.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị tinye akara checkbox nke Chọọ maka duplicated Songs na pịa iṅomi button, a usoro nwere ike ịchọpụta iTunes duplicates na-enye gị ike ime ka ha ahịhịa.
3 Embed hụrụ artwork niile iTunes songs
Mgbe scanning usoro, pịa otu song na ego ya ọmụma na nri n'igbe. Wee pịa Mee bọtịnụ na ala. Ị nwere ike họrọ ọtụtụ songs itinye artworks ka songs n'otu oge. Mgbe ahụ artworks na ozi ndị ọzọ na-agbakwunyere na iTunes songs na i nwere ike nyefee ọmụma tinyere songs gị obere ngwaọrụ.
Cheta na: Ị nwere ike a ohere nke abụọ dezie ozi maka gị niile songs. Pịa Dezie icon na nri n'igbe na ịdọrọ ihe oyiyi na artwork ebe ịgbanwe album nkà. Ma jupụta na ndị ọzọ na-edezi ubi na ozi ị na-ahọrọ.
Chọta a usoro oké na mfe iji? Ị kwesịrị ị na ibudata onye nwere a-agbalị. Ị dịghị mgbe a ga ka ala.
Ebe a bụ video nkuzi i nwere ike na-ezo aka: